စုံစီနဖါ: ၁၈ နှစ်အောက်မဖတ်ရ PDF စာအုပ်များ စုံစီနဖါ
၁၈ နှစ်အောက်မဖတ်ရ PDF စာအုပ်များ ကိုကိုမောင်မောင် တော်တော်ဆိုး (အပိုင်း - ၁)
ကင်ပေစခန်း (အပိုင်း - ၁)
ကင်ပေစခန်း (အပိုင်း - ၂)
ကာမပန်းတိုင် (တင်ဆက်သူ KMT99 - အချစ်တက္ကသိုလ်)
ကာမသပွတ်အူ (တင်ဆက်သူ လင်းဆက် - အချစ်တက္ကသိုလ်)
ကာမဗျူဟာ (တင်ဆက်သူ KMT99 - အချစ်တက္ကသိုလ်)
ကျွန်တော်မလွန်ဘူး မမမြိုင် (တင်ဆက်သူ KMT99 - အချစ်တက္ကသိုလ်)
ကျမရဲ့ ဖြစ်အင် (တင်ဆက်သူ KMT99 - အချစ်တက္ကသိုလ်)
ကွဲပလေ့စေ မောင်မထုတ်နဲ့ (တင်ဆက်သူ KMT99 - အချစ်တက္ကသိုလ်)
ကမ္ဘာတည်ဓာတ်စာ (တင်ဆက်သူ လင်းဆက် - အချစ်တက္ကသိုလ်)
ကျေးဇူးရှင် Bus ကားကြီး (ဇော်ဦး)
ကျွန်တော့်ဘ၀ အမှတ်တရများ (နာဂ)
http://www.mediafire.com/?6wnt028wpdg21kd ကျွန်တော်နှင့် ကတော်တွေ
ကြောင်ခံတွင်းပျက် ၁ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
ကြောင်ခံတွင်းပျက် ၂ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
ကြောင်သူတော် ကြက်သူခိုး ၁ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
ကြောင်သူတော် ကြက်သူခိုး ၂ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
ကျွန်းတောထဲမှ ငသုန် (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်း (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
ကူညီပါရစေ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
ကျွန်တော့်ဘ၀ အတွေ့အကြုံများ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
ကြာကူလီ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
ကြာကြာဝါးမည့်သွား (ကိုတိုးကြီး ရေးသည် - ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
ကီပင် (ပန်းရိုင်း ရေးသည် - ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
ကာမဘုံသား ဆုံလည်နွား (ပေါက်ကုန်းလဒ ရေးသည် - ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
ကျွန်တော်နဲ့ ထိုနှစ်ယောက် (ရေးသူ hotrod - ဖိုရမ် မြန်မာဆိုင်ဘာ)
ကျွန်တော်နှင့် သက်ဆိုင်သော ...(Redlace)
ကိလေသာအရှုပ် အဘယ်သို့တွင်ခုတ်ရပါ့ (Credit to Kyet Euu @ mmcyber)
ကျွန်တော်တို့ လင်မယား-၂ (ရေး-အောင်လေး ရန်ကုန်၊ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
ကျွန်တော်တို့ လင်မယား-၁ (ရေး-အောင်လေး ရန်ကုန်၊ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
ချစ်ဧည့်သည် ချစ်ဧည့်သည်ပျို (ရွှေညာသား) (Credit: မြန်မာဆိုင်ဘာ)
ခင်မမ၏ ကိုယ်တွေ့ ဇာတ်လမ်း
ခပ်ပြင်းပြင်း ရင်ခုန်သံ ပိုင်ရှင်များ
ချွေးမအလိမ္မာ (အပိုင်း ၁)
http://www.mediafire.com/?8dcz66dmkd4zhsa ချွေးမအလိမ္မာ (အပိုင်း ၂)
ခံစားကြည့်မှ သိမှာပါ (တင်ဆက်သူ KMT99 - အချစ်တက္ကသိုလ်)
ချစ်ခြင်း ဆည်းဆာ (တင်ဆက်သူ နွေဦး - အချစ်တက္ကသိုလ်)
ချစ်မိပြီ ဦးရယ် (တင်ဆက်သူ KMT99 - အချစ်တက္ကသိုလ်)
ခရမ်းရင့်ရင့် သင်္ကြန်နေ့ရက်များ (ရေးသူ ... အမရာ၊ ဖိုရမ် ... အချစ်တက္ကသိုလ်)
ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ အပိုင်း(၁) ... (ရေးသူ ပန်းရိုင်း , credit@ dr. chatgyi)
ချစ်လိပ်ပြာတောင်ပံဖြန့်ချိန် (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
ခြွေလှည့်တော့...တံချု (Credit to Kyet Euu @ mmcyber)
ဂီးတစ်ကောင်၏ ဖွင့်ဟ ၀င်ခံချက်
ဂျီနာ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
ငထောရဲ့  မနော (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
စိတ်ကူးထဲက ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ် ကိုbodawtoteရဲ့ မပြီးဆုံးသော နာမည်ကြီးဇာတ်လမ်းလေး ( မြန်မာဆိုက်ဘာမီဒီယာ )
စိတ်ထတဲ့ မမ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
စပွန်ဆာ အန်ကယ်ကြီး ၂ (ရေး - ဘိုမောင်၊ ဒေါက်တာချက်ကြီးဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
စပွန်ဆာ အန်ကယ်လ်ကြီး အပိုင်း(၃)
(ရေး ဘိုမောင် ... ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
တစ်ဖက်ကမ်းက အချစ်လမ်းလေး မဆုံးချင်
တရှိုက်မက်မက် စိုက်ချက် (ရေးသူ- ကာမ မင်းသား)
တကယ်ပဲ ခက်တဲ့ မောင်
တိုက်ဆိုင်မှုမရှိခဲ့ရင်တော့ ခွင့်လွှတ်ပါ (မောင်ဇော်ဦး)
ထိုတစ်ည၀ယ် (ဂျင်ကလိ )
ဒါကတော့ လုပ်မှာပေါ့ (တင်ဆင်သူ KMT99းCredit - အချစ်တက္ကသိုလ်)
နတ်သမီးပေးတဲ့ ချစ်လက်ဆောင် (မောင်ဟိတ်) – PDF by Dr. ချက်ကြီး
နေရောင်အပွင့်၌ ပျော်ကျလာသော နှင်းမှုန်တစ်ပွင့် (မြန်မာဘီယာဆိုင်)
နောက်မီးနီနီ လင်းနေသည် (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
နွားသိုးကြိုးပြတ် ရေး-ပန်းရိုင်း(ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
နှစ်သိမ့်လိုက်ပါခင်ရယ် (Credit to Kyet Euu @ mmcyber)
နာတော့နာတာပေါ့ ရေးသူ-ကာမမင်းသား xxxxx TYPED BY-ဆြာသြ xxxxx FROM-အချစ်တက္ကသိုလ်
ပထမဆုံး လိုးဖူးသူhttp://www.mediafire.com/?djg9drn76gfs2clပထမဆုံး အချစ်ကို စားသုံးခြင်းhttp://www.mediafire.com/?do6siu91jorlj48ပလက်ဖောင်းပေါ်မှ အဖြစ်အပျက်များhttp://www.mediafire.com/?0196kch666hjfbbပန်းစားဘီလူးhttp://www.mediafire.com/?o4688coa89c3aysပန်းဦးပန်သူ သီတာhttp://www.mediafire.com/?341lf0pr4t2horrပန်းပန်လျက်ပါhttp://www.mediafire.com/?708y7zuvbc919n2ပန်းဘုရင်မလေး (ဇော်ဦး)http://www.mediafire.com/?u2v45i0vk2a1f0vပထွေးhttp://www.mediafire.com/?zyo44bc7je4v6z3ပထွေး (တင်ဆက်သူ KMT99 - အချစ်တက္ကသိုလ်)http://www.mediafire.com/?buwbq887r61eceoပြီးခဲ့တာတွေ ပြီးပါစေတော့http://www.mediafire.com/?carren5u1fwt652ပေးဆပ်ခြင်းhttp://www.mediafire.com/?qloltmehr98u1eaပူစူးမhttp://www.mediafire.com/?2c8f8yp3d3hpri7ပင်လယ်ပြာပြာ အချစ်ပြာပြာhttp://www.mediafire.com/?c1n883dw8d8g96bပိုက်ဆံချေးခြင်းhttp://www.mediafire.com/?y9qpn10halgfjslပင့်ကူနီမလေးhttp://www.mediafire.com/?dtrt6uc1wsaem05ပြန်ပြောရင် အလွမ်းဖြစ်စေhttp://www.mediafire.com/?iuch7592u6qc6u3ပြန်တွေးမိတိုင်း မျက်ရည်ဝိုင်း (Fly)http://www.mediafire.com/?m3y3ul2dgbygdglပြိုင်မြင်းတို့၏ ခွာသံhttp://www.mediafire.com/?nal0k501i8iy7mkပျံလွှားမhttp://www.mediafire.com/?d3zeflmmyx7ek6sပုလိပ်ရောဂါ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/?s4r628utruxsueyပါကင် (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/?wbpg97c681w7grnပင်တီနီနီလေး (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/?6e9f1d7wjg53lz7ပွဲကြမ်းသွားမယ် (တင်ဆက်သူ KMT99 - အချစ်တက္ကသိုလ်)http://www.mediafire.com/?eap794obxg0zyzw ဖိုးဝမ်းစီတူး ၁ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/?nesi0k2evygp14aဖိုးဝမ်းစီတူး ၂ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/?23d6cjgp2k6u8ff ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းများhttp://www.mediafire.com/?qfg2qhb6xs912xgဖိနပ်ကလေးတစ်ရံhttp://www.mediafire.com/?uur4b1jh0jweakoဖေဖေကြီး ညာတယ်http://www.mediafire.com/?6bbhxi30s6xrej4ဖီလင်အိမhttp://www.mediafire.com/?h92sn370zxk07adဖိတ်ခေါ်ရင်ကွယ် လိုက်မယ်ကွယ်http://www.mediafire.com/?izhooqn820khtyeဖောက်ပြန်လေသော အချစ်များhttp://www.mediafire.com/?g0da051un5j1sh8ဖြူသီခိုင်ရဲ့ ဆူရှီဆိုင် ၁ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/?c892g7fgf91n5hdဖြူသီခိုင်ရဲ့ ဆူရှီဆိုင် ၂ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/?u7vr3izugadt6y6 မမကို အလိုမလိုက်နဲ့ မောင် http://www.mediafire.com/?g0wmav4xinw8we2မမသွယ် http://www.mediafire.com/?xl8ux8f8qjn63eeမမ မောင်မောင် မို့မို့ http://www.mediafire.com/?jec34xyt2aocl69မမဇင် - ၁ http://www.mediafire.com/?5inkh9ks7nfn8v6မမဇင် - ၂ http://www.mediafire.com/?1nau9ltyo05qp66မချောသုံးယောက် ကိုယ်တစ်ယောက် http://www.mediafire.com/?8c7ed8iaje1eabxမချစ်တဲ့သူများ မဖတ်ရ http://www.mediafire.com/?br8ebx42rwi5jqgမပိုင်သည့်ပန်း http://www.mediafire.com/?vff29wc2n7h5vz2မတင်းတိမ်သော ကာမဘုံ http://www.mediafire.com/?bju28xdlulb3xb8မေ့လို့မရဘူး http://www.mediafire.com/?xvh933cn0k2dslwမယားပါသမီးလေး http://www.mediafire.com/?jomipmajsm10mdaမရည်ရွယ်သော အဖြစ်များ http://www.mediafire.com/?cp8l5rlpqo69yjoမနူးမနပ်ကလေး http://www.mediafire.com/?000klwaxv8eb1v1မာန်ဟုန်ပြင်းပြင်း ၁ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/?a7rv599kmsaz9wdမာန်ဟုန်ပြင်းပြင်း ၂ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/?a8u9xcickbar7d9မာန်ဟုန်ပြင်းပြင်း ၃ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/?9h22srrehmr89x7မာန်ဟုန်ပြင်းပြင်း ၄ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/?i27d5hhb18nc5ifမာန်ဟုန်ပြင်းပြင်း ၅ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/?8l3d2qldjnnndfcမုန်တိုင်းထန်ထန် (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/?yrqhtt1m2dx77t7 မချစ်ရင် မနေနိုင်တာက လွဲလို့http://www.mediafire.com/?h73fno41toqpinpမမအေးရဲ့  မောင်လေးhttp://www.mediafire.com/?ksee9chi46qxbw9မရှက်ပါနဲ့ ကလေးရယ်http://www.mediafire.com/?ug0slijb820ajjwမာနတ်၏ မယားပါသမီးhttp://www.mediafire.com/?m78rnqkwcn1398cမေဧကရီ (Crazzy4)http://www.mediafire.com/?8lliprskjnz7wipမမဖြူhttp://www.mediafire.com/?recxddbmnaewge1မာယာများနှင့် အချစ်http://www.mediafire.com/?le2yu3br4oz1a2zမမလှလှ (ပေါသွပ်)http://www.mediafire.com/?3ben7c1436uufizမာနမင်းသမီးhttp://www.mediafire.com/?sx9za5oo011cz3hမကြောက်ပါနဲ့http://www.mediafire.com/?vo6ag5gtmsaci9vမဗေဒါ အံကိုခဲhttp://www.mediafire.com/?i6thamg8woh92mhမမကို ချစ်လို့http://www.mediafire.com/?vbdsche6yw9sratမီးကိုတိုးတဲ့ ဖလံပိုး (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/?jcwbxl8o0zzn5pfမလွန်ဆန်နိုင်ဘူး (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/?hszj43ihn01np5n မတ်မပြေhttp://www.mediafire.com/?2c3svd5wn3149gxမယားတောသူhttp://www.mediafire.com/?2nf8officyy3irfမဟူရာ နှလုံးသားhttp://www.mediafire.com/?awfzzlpigwipxe8မှန်ရာကို ထွက်ဆိုပါမည်http://www.mediafire.com/?a9uvcte3oabwt79မိန်းမလှကျွန်းhttp://www.mediafire.com/?x993cnsbx07q2u7မောတော့ မောတာပေါ့http://www.mediafire.com/?d4w3vt77js3f2ozမှတ်မိပါသေးသည်http://www.mediafire.com/?o1c12fdvn1yfufaမီးဆန္ဒကိုမေးပါဦးhttp://www.mediafire.com/?1v4i8y64v096lzaမှန်ရာကို ထွက်ဆိုပါမည်http://www.mediafire.com/?a9uvcte3oabwt79မမရဲ့ မောင်လေး (တင်ဆက်သူ လင်းဆက် - အချစ်တက္ကသိုလ်)http://www.mediafire.com/?09b1kkik0pgh00mမမလှလှ ခပ်ရွရွ (တင်ဆက်သူ KMT99 - အချစ်တက္ကသိုလ်)http://www.mediafire.com/?7iy3rdvdcmltlr9မယုံမရှိနဲ့ တကယ်ရှိတယ် (တင်ဆက်သူ KMT99 - အချစ်တက္ကသိုလ်)http://www.mediafire.com/?i5595aip9br9ge2မင်းကြောင့် ဒါတွေဖြစ်ကုန်ပြီ (တင်ဆက်သူ KMT99 - အချစ်တက္ကသိုလ်)http://www.mediafire.com/?2lx1r1j9uajace7မောင့်အကြိုက်လိုက်လျောမယ် (တင်ဆက်သူ KMT99 - အချစ်တက္ကသိုလ်)http://www.mediafire.com/?n26ipqliv9c45ewမိကဲလေး (တင်ဆက်သူ လင်းဆက် - အချစ်တက္ကသိုလ်)http://www.mediafire.com/?4wwht7thw221453မိန်းမတွေက ဒီလိုပဲ (တင်ဆက်သူ KMT99 - အချစ်တက္ကသိုလ်)http://www.mediafire.com/?zw5e2227gl8dtsjမိနစ်ခြောက်ဆယ် အတွင်းhttp://www.mediafire.com/?75thso877gv95kcမင်းရဲ့ အကြည့်တွေကို သိနေတယ်http://www.mediafire.com/?tgyqdf3ra34m3akမင်းကိုလာအောင် လုပ်ပေးမယ်http://www.mediafire.com/?xah5awy7kascrjsမြတ်မလားလို့ ရင်းကြည့်တာhttp://www.mediafire.com/?b9on4ea2wwd17qjမိုးသက်လေညှင်းhttp://www.mediafire.com/?4kckhf2p17741iuမှည့်လေသမျှ ချိုသမျှကိုhttp://www.mediafire.com/?2wa5oy9bk0nlj23 မြောက်ကျွန်းသူ လူပေလော (Typed by: KMT99 - PDF by: ဒေါက်တာချက်ကြီး)http://www.mediafire.com/?89u5un5joe6t53wမမပွင့်ကို ဖွင့်တဲ့သူ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/?hv2de6cg0iopap1 မုဒိန်းကောင်http://www.mediafire.com/?jibfnk0vyq7dajn မောင့်ရင်ထဲက စန်းသော်တာ(ဒေါက်တာချက်ကြီးဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/view/?vqa38g75j866c2v မေ့အတွက်ချန်ထားဦးနော် (Credit to Kyet Euu @ mmcyber)http://www.mediafire.com/?lp0wff3lixwlp6y မောင်မထောင်းနဲ့ ညောင်းလိမ့်မယ် (ရေး-ချမ်းမြေ့သာဇံ ဇနီးမောင်နှံ၊Typed by: loverboy2011- PDF by: ဒေါက်တာချက်ကြီး)http://www.mediafire.com/view/?3236zxnohox0a9m မိုးဆမ်းပန်း လန်းလန်းလေး (ရေး-ကမာရွတ်မှာ နှစ်ခါတွတ်တဲ့ ဗမာငချွတ်)(ဒေါက်တာချက်ကြီးဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/view/?eck9980d82k6d04 ဗို့အား ၁၅၀၀http://www.mediafire.com/?sa39k8m1ydezb0zဗလ ရှိတယ် ဇ ရှိတယ် (တင်ဆက်သူးKMT99 - အချစ်တက္ကသိုလ်)http://www.mediafire.com/?6455e2b3r5ekcqi
ဘူးသီးဇာတ်လမ်းhttp://www.mediafire.com/?5xypq06k0g53at5ဘဲဖွတ်သည် မထား (Crazzy4)http://www.mediafire.com/?cid4mnrr44aufv1ဘုံအချစ်ဝယ်http://www.mediafire.com/?mf9184ck2vjb44bဘ၀အလှမမျှပြီhttp://www.mediafire.com/?eo88itmdazmu4n4ဘိုတဲမှာ အကိုဆွဲမယ် (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/?9t8bytxoa5j0bznဘောစိ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/?pnp0eicaeh4j4w4 ရုံးတွင်းဇာတ်လမ်းများ (၁)http://www.mediafire.com/?33r76c5a2j32ztdရုံးတွင်းဇာတ်လမ်းများ (၂)http://www.mediafire.com/?2r2oxe1r44f4dywရာဇ၀င် မသိရင် ကညာခင်တိုင်းဟာ အပျိုစင်http://www.mediafire.com/?winl4n4jggl73anရာဇ၀င်ကျွေးhttp://www.mediafire.com/?f4jg6a4lr65h8ggရင်ခုန်သံ အစစ်http://www.mediafire.com/?lful75uqawayoseရှေ့ နေမလေး သီရိနှင့် သူငယ်ချင်း သုံးယောက် အမှု (PDF by: ဒေါက်တာချက်ကြီး ~ Credit to: အကယ်ဒမီ)http://www.mediafire.com/?tp6m9vxzotde178ရေမရောတဲ့ နို့ချိုချို ( တင်ဆက်သူ~ KMT99 - အချစ်တက္ကသိုလ်)http://www.mediafire.com/?bwc2dq0b6w31ux7ရင်နာအောင်လုပ်ရက်တယ် (တင်ဆက်သူ~ babahta - အချစ်တက္ကသိုလ်)http://www.mediafire.com/?9kstmfuhtzhqa7qရဲရဲရင်ဆိုင် (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/?uf2aavc4c27x36uရွာနားကမြက် (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/?7a5f79892mxzp0pရှောင်လေဝေးဝေး (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/?yrrusfysr1deuqnရွှေဖူးစာhttp://www.mediafire.com/?e96dxw8m1m7z5tnရမ္မက်ဆန္ဒ နှင့် သားကောင်http://www.mediafire.com/?ntvjpcjg2jr4xmqရောဂါhttp://www.mediafire.com/?rccq595n3pmicrlရောဂါကကျွမ်းပေမယ့် ဆရာကစွမ်းပါတယ်http://www.mediafire.com/?wuaq0uz8xm3rahhရင်တွေ တဒိန်းဒိန်းခုန်နေပြီhttp://www.mediafire.com/?qk65hxn842up38uရန်ကုန်မှာ ပြန်ဆုံမယ် (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/?vcs0v3b0ok0dacm ရွှေကြိဂံ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/?u8hctww6g4wkm9dရင်ခွင်ရိုင်းတို့ ကခုန်ချိန် (ATun, Cyberဖွားဖွား ,notorious - from mmcyber)http://www.mediafire.com/?c94s59gf3765mc7 ရေစီးတစ်ခါ ရေသာတလှည့် (http://drchatgyi.blogspot.com မှကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/view/?ctvpr2ermpv353rရွှေတြိဂံနယ်မြေ(၂) (http://drchatgyi.blogspot.com မှကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/view/?463xx7vq6mdxuadရမ္မက်ကိုရှင်းပါလို့သစ္စာကိုနှင်းပါ့မယ်(http://drchatgyi.blogspot.com မှကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/?q3w9rkfe3wo9dr3 ရုန်းပါနဲ့လား (ရေး-ကာမမင်းသား၊ typed by ဆြာသြ -အချစ်တက္ကသိုလ်)http://www.mediafire.com/view/?vh5aquliioq7ucf ယောက်ျားမိန်းမ မဟူတည်း (တင်ဆက်သူ~ KMT99 - အချစ်တက္ကသိုလ်)http://www.mediafire.com/?rz5bpha1bo6k3eo ယုန်ကမတိုး ပိုက်ကတိုး ရေးသူ- ပန်းရိုင်း (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/view/?8x0tuhb36qv7vr7 ယဉ်ယဉ်အပိုးကျိုးပါပြီရှင် (from: အချစ်တက္ကသိုလ် - pdf by: Bigguy)http://www.mediafire.com/?fqxuw1eorsmd5gn လောကစည်းစိမ်
http://www.mediafire.com/?ip62isicep7h7sl သရဲကုန်းမှာ အစွဲကျုံးမယ်
http://www.mediafire.com/?5nfa32l2d8hjz5g သားသား မြတ်နိုး
http://www.mediafire.com/?xa57axjh35v1uxt သမီးလဲ ဦးလိုပါပဲ (ဒေါက်တာချက်ကြီးဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
သွေးရည်စက်တို့ ထိမှန်ခြင်း (ရေး ချမ်းမြေ့သာဇံ မောင်မောင်နှံ - Typed by KMT99 – from achittatkatho))
http://www.mediafire.com/?wllarbskaz3o0m1 သိုင်းကြူးကိုကို (ရေး အာသာပြေ (မန်း) xxx Typed By ဆြာသြ xxx From achittatkatho)
သူရဲကောင်းလေးဖော် ( ရေး- ချမ်းမြေ့သာဇံမောင်မောင်နှံTyped by KMT99 – from achittatkatho)http://www.mediafire.com/?f46h333m18220oh သူလိုမင်းသမီး (တက္ကသိုလ်နေ၀င်း) - Credit to annonymous & the original uploader of scribd file.Download from scribdDownload from mediafireDownload from dropbox အချစ်ကြိမ်လုံးhttp://www.mediafire.com/?lyei6btij7nwlt3အချစ် ၁http://www.mediafire.com/?anvpez87nqh83crအချစ် ၂http://www.mediafire.com/?6yqayfmmxy66reaအချစ်အတွက် ဆက်လက် အသက်ရှင်မယ်http://www.mediafire.com/?do2g199rrd1s3o1အချစ်တို့၏ မာယာhttp://www.mediafire.com/?arc3s3s6cn26r6rအချစ်ကိုသိချိန် (ရေးသူ ပေါသွပ် - Credit: ညမင်းသားဖိုရမ်)http://www.mediafire.com/?9hdlj1191t1o5ssအချစ်ကျောင်းhttp://www.mediafire.com/?a4vvqngdidzpiwmအချစ်ဂေဟာhttp://www.mediafire.com/?paw9cexo66hmauhအချစ်ဟောင်း အချစ်သစ် အချစ်တပတ်နွမ်းhttp://www.mediafire.com/?r16eko2cep1kr3mအချစ်ကိစ္စ အလိုရှိသည်http://www.mediafire.com/?oc2a8oo959ib4z3အချစ်ရှာဖွေသူhttp://www.mediafire.com/?gwmny8l10tup9d3အချစ်ရောဂါhttp://www.mediafire.com/?ex5gz3muiqjg8fjအချစ် နိဗာန်ဘုံhttp://www.mediafire.com/?a7i2026zkhhe2fxအချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းများ (mmcyber.net)http://www.mediafire.com/?2l2nlvn3p3v9ab2အချစ်မိုးhttp://www.mediafire.com/?s5xiz3z960rtt74အချစ်တွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ အိမ်ကလေးhttp://www.mediafire.com/?im9lf93h7t41lltအချစ်ဇာတ်လမ်း ရိုးရိုးလေး တစ်ပုဒ်http://www.mediafire.com/?akbweyxg4gxhsenအချစ်တစ္ဆေညhttp://www.mediafire.com/?psl8rd84csmbw5hအချစ်အတွက် အလိုအပ်ဆုံး (တင်ဆက်သူ KMT99 – Credit: အချစ်တက္ကသိုလ်)http://www.mediafire.com/?h5ld01kccd1bt0nအချစ်ဦးမို့ ရစ်မူးမိ (တင်ဆက်သူ KMT99 – Credit: အချစ်တက္ကသိုလ်)http://www.mediafire.com/?dgqk0qau99duq4qအချစ်တန်ဖိုးhttp://www.mediafire.com/?k5nsbjkt2s1ccxjအချစ်နဲ့စစ် ၁ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/?56a4lf9w6mfwszqအချစ်နဲ့စစ် ၂ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/?cu41aghpthrbc9jအချစ်လုပ်အားhttp://www.mediafire.com/?vnm94ftty2jj51a အပျိုစင်လုံမေချောhttp://www.mediafire.com/?5touuy3ae044bppအရပ်မြင့်မြင့် ချစ်သူhttp://www.mediafire.com/?8gwpar5ns0z50nzအစေခံ (၁)http://www.mediafire.com/?lzaz8llpihp6ywhအမုန်းလယ်ရဲ့  မုန်းပင်လယ်http://www.mediafire.com/?6rq516w1vxjmpvrအခါလွန်မိုးhttp://www.mediafire.com/?kdbfshz8xzdeml2အပြာရင့်ရင့် နေ့စွဲများhttp://www.mediafire.com/?fv5lkfb9bv4r8llအရိုင်းမေပျိုhttp://www.mediafire.com/?kgtmubo5dw4fzyuအရိုင်းနှင့် အယဉ်http://www.mediafire.com/?7atzz4byzbebl13အသစ်ကလေး နှစ်ယောက်http://www.mediafire.com/?a7vpta0wc94k5exအမေတစ်ခု သားတစ်ခုhttp://www.mediafire.com/?885dv728mmx1b40အလွယ်ဆုံးနောက်ပေါက် (Hotrod)http://www.mediafire.com/?vcbjclt7xf6ykcpအမေပြီးတော့ သမီးhttp://www.mediafire.com/?ry4g9aa9b6v98h0 အပျော်ချစ်သူhttp://www.mediafire.com/?pq7uzp4m9dlw6ooအစက ဒီလိုမှန်း မသိလို့http://www.mediafire.com/?17ga0hnnfo1cboaအဖြူရောင် နှလုံးသားhttp://www.mediafire.com/?5x5psla4p5k7s22အငြိမ့်မင်းသမီးများ ရည်းစားထားတော့http://www.mediafire.com/?plx8bd1zlcbt4d6အဓမ္မကာမ၏ မဟာရသhttp://www.mediafire.com/?mkn1d8o5axcudtvအဖြည့်ခံhttp://www.mediafire.com/?n2lfmexr9lfucsjအကြံကြီးသူhttp://www.mediafire.com/?ap17jzgaridv47gအရမ်းပဲ အရမ်းပဲhttp://www.mediafire.com/?w508m4ib2v5qq7cအရွယ်လွန်အချစ်http://www.mediafire.com/?q2x2g211hs5djcxအရည်တွေပျော်ကုန်ပြီhttp://www.mediafire.com/?yeuj5rjpvau4acaအနမ်းဆိုးများ၏ နောက်ကွယ်http://www.mediafire.com/?l2aqlw2lfz12zxzအသည်းတံခါးလေး ဖွင့်ထားပါhttp://www.mediafire.com/?m8ek7culhtlkrg8 အသက်နှင့် ရမ္မက် (မျှဝေပေးသူ - လင်းဆက်)http://www.mediafire.com/?5bdr88ix60gfqb9အပျိုပေါက်မလေးhttp://www.mediafire.com/?tz8ov1k3uythzs7အရသာhttp://www.mediafire.com/?k8udi9k0kl9wlx0အတာရေနဲ့ ဆေးပါ့မယ်http://www.mediafire.com/?l9fv2yn4bwl777aအသည်းတွေလည်း ကျွမ်းပြီငယ်http://www.mediafire.com/?20d2ckt26kb5039အပျိုကြီးပဲ လုပ်တော့မယ်http://www.mediafire.com/?zrb9y8w9gg020j2အဖြူရောင် သစ္စာစကားhttp://www.mediafire.com/?vw6qv8ub676b528အပိုဆုhttp://www.mediafire.com/?39iut8olu8uun54အမုန်းတရား၏ အဆုံးသတ်မျဉ်း (မောင်ဟိတ် )http://www.mediafire.com/?d95ijmjewzw1dz6အလှမပြည့်ခင် ကြွေတဲ့ပန်းhttp://www.mediafire.com/?pf4fpfcxzpef4kqအိမ်မက်ထဲက စင်္ကာပူhttp://www.mediafire.com/?c8k2tw15q7sqi5yအိမ်မက်ချိုချိုhttp://www.mediafire.com/?9902nyo4iak89kwအဲဒါကြီးကို ချစ်တာhttp://www.mediafire.com/?9bi0z74xxzvb1k5အောလောက၏ စိန်ခေါ်သံhttp://www.mediafire.com/?xb02z8gzocngdreအိုး မိုင် ဒါလင်http://www.mediafire.com/?2a0sq2ig0m7of31အတ္တစိတ်http://www.mediafire.com/?k9475optizmzbfaအတ္တမျဉ်းပြိုင်များhttp://www.mediafire.com/?uqx2f92az6ee79f အို ဆရာမရယ် (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/?n5fecfs2f48bv14အိုးချင်ထိ ကြိုးချင်းညိ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/?y4mqji5pbd29502အိုင်တွေ့တိုင်း ခြေဆေးတဲ့သူ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/?leqdy9albaneosaအ . စ . လ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/?o1p3y971c36rb35အတွင်းခံဘောင်းဘီလေး ၁ (ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/?m6j6xmcbrz85ofpအိမ်တွင်းဇာတ်လမ်းhttp://www.mediafire.com/?0q05okd7z5ndv5a အမိုက်မှောင်ဆရာကြီး ၁+၂ နှစ်တွဲပေါင်း (မြန်မာဆိုင်ဘာ)http://rghost.net/1776776 အကိုက ဖိုက်တော့ အညိုက ကြိုက်ပေါ့ (ဘိုမောင်ရေးသည် … from Dr. Chatgyi)http://www.mediafire.com/?74x303sn7tloq23အပျော်ချစ်ကလေး ဇာတ်သိမ်းပိုင်း (Typed by: KMT99 - from achittatkatho)http://www.mediafire.com/?boblwvdoh8lphltအမှောင်ထဲက အမိုက် (Typed by: KMT99 - from achittatkatho)http://www.mediafire.com/?55l0p27kp444cmg အဲ့တာလေးတွေ ကြွေနေတာ(ဒေါက်တာချက်ကြီး ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)http://www.mediafire.com/view/?i0tahlfsqnhbw63 အက်ဆစ်မြား (Credit to Kyet Euu @ mmcyber)http://www.mediafire.com/?h95e63r1g8ufrmn အချစ်လူဆိုးလေး (ရေး-အမည်မသိ၊ typed by-KMT99@ အချစ်တက္ကသိုလ်)http://www.mediafire.com/?w91ea9hodmd8964 ဟယ်လို
ဟိုပင်ဒီပင် ကူးပါလို့ http://www.mediafire.com/?gj3j8ofh8sykjkb
ဟင့်အင်း .. ၀ သေးဘူးဆို (တင်ဆက်သူ ~ KMT99းအချစ်တက္ကသိုလ်)
ဒေါ်လေးဧ။် ကိုယ်ကာယ အလှသင်တန်း http://www.mediafire.com/download.php?2lbaor35u65xs1nဟင့်အင်း http://www.mediafire.com/download.php?ym8y4sw4ffiu51gဟင့်အင်း ၂ http://www.mediafire.com/download.php?d3yc3e3aisk1sk9အိမ်နီးချင်းကောင်း http://www.mediafire.com/download.php?ub5rk9ym7qeakngချစ်ဓားပြhttp://www.mediafire.com/download.php?6yi26csevv1w4gwထူးရှယ် http://www.mediafire.com/download.php?yx1995xcx0s8mrjမလျို့ဝှက်သောနှင်းhttp://www.mediafire.com/download.php?6jimb1wk67eyejfမှားပါတယ် ကိုသောင်းရယ်http://www.mediafire.com/download.php?o37li59n9gmcnh9နှစ်ပင်လိမ်http://www.mediafire.com/download.php?8hwn6172db2fqxeနုထွားကြီးမို့http://www.mediafire.com/download.php?cw8dc7m45z3ik1mမမစန်းhttp://www.mediafire.com/download.php?2s9gir40bea22tsရင်ခွင် ( ၁ )http://www.mediafire.com/download.php?j5eyr32s7hg8256ရင်ခွင် ( ၂ )http://www.mediafire.com/download.php?f30baet0w70kdtu http://www.mediafire.com/file/l7di7utafc9tcz6/-နေခြည်လွှမ်းသောအချစ်ဇာတ်လမ်းများ(၁)_(၂)(၃)_(သာသာပြန်ရုပ်ပြဇာတ်လမ်း)_-_(_ကာတွန်းဇာတ်လမ်း_).rarhttp://www.mediafire.com/file/ecfl5twybl93jzc/-ပဉ္စလက်မာယာရှင်-(_၁_)(_၂_).rarhttp://www.mediafire.com/file/znpi7jbn31f4x1n/-ကျောင်းသူလေးများရဲ့ဂလဲ့စား-(_အပိုင်း_၁-၂-၃-၄-၅_).rarhttp://www.mediafire.com/file/sgv56e136 ... olume-3__(သာသာပြန်ရုပ်ပြဇာတ်လမ်း).pdfhttp://www.mediafire.com/file/f65adoxx4 ... lume-4.pdfhttp://www.mediafire.com/file/bs0qe3cb1 ... lume-5.pdfhttp://www.mediafire.com/file/fax8rh225 ... lume-6.pdfhttp://www.mediafire.com/file/xm6wtd8hd ... lume-7.pdfhttp://www.mediafire.com/file/btyc6c255 ... lume-8.pdf Posted by
simyatiApril 21, 2013 at 11:52 PMအကို ဘကြီးထောင်တော်တော်ဆိုး ကာတွန်းရုပ်ပြလေး ကျေးဇူးပြုပြီးတင်ပေးပါဦးReplyDeleteKo Nay LinApril 22, 2013 at 7:27 AMThis comment has been removed by the author.ReplyDeleteဇော်ထွန်းApril 28, 2013 at 6:49 AMချမ်းကို စာအုပ်လေးတွေလဲတင်ပေးပါအုံး အစ်ကိုReplyDeletenayminJune 4, 2013 at 2:35 AMချမ်းကို အချစ်တက္ကသိုလ်ကို တင်ပေးပါဗျာသူ.စာအုပ်တွေကို အမြဲအားပေးနေတဲ.အကြောင်းလည်းပြောပေးပါ sexy စာအုပ်ဆိုပင်မဲ. သူ.စာအုပ်တွေက အချစ်ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေ ဖတ်ရသလို.ပါပဲReplyDeleteshwetunJune 11, 2013 at 3:08 AMဟုတ်တယ်ဗျို့ channko စာအုပ်တွေ သူနာပြုဆ၇ာမလေး ၊ပီယာနိုဆ၇ာမလေး ၊ ကျူ၇ှင်ဆ၇ာမလေး၊ ကိုေ၇ွှဘစွန့် စားခန်းများ။ ၇၇င်လုပ်ပါဗျို့ဘယ်မှာမှ၇ှာမ၇လို့ ပါ။ReplyDeletekokantJune 15, 2013 at 9:46 PMDown မ၇ပါ။ကူညီပါအုံးReplyDeletehlaing minJuly 23, 2013 at 2:17 AMဘယ်လိုဒေါင်းရမှာလဲ ကူညီပါအုံးဗျာReplyDeletehlaing minJuly 23, 2013 at 2:20 AMAll sexy bookရှိတဲ့ ဆိုက်လေးတွေရောပြောပြပါအုံးReplyDeletenainglin tunAugust 27, 2013 at 6:02 AMဘယ်လိုဒေါင်းရမှာလဲ ဗျာ please ReplyDeletesexDecember 26, 2013 at 8:28 AMစာအုပ်​ReplyDeleteKyaw ThuFebruary 2, 2014 at 11:31 PMညစ်တယ်ဗျာဒေါင်းမရလို့ကူညီပါအုံးReplyDeleteAdd commentLoad more...
၁၈ နှစ်အောက်မဖတ်ရ PDF စာအုပ်များ
Facebook video chat ကိုအသုံးပြု့ခြင်း